I-Ginkgo House - Ubuciko bendabuko nekhaya lezandla - I-Airbnb
I-Ginkgo House - Ubuciko bendabuko nekhaya lezandla
Saint Francis, Wisconsin, i-United States
Ikamelo e-i-bungalow ibungazwe ngu-Robert & Mary Jo
U-Robert & Mary Jo Ungumbungazi ovelele
Yikhaya le-Arts & Crafts/Frank Lloyd Wright edolobheni kodwa ezweni - i-turkey, inyamazane, i-coyote +egcekeni lethu! Yindawo ekahle yokuphumula - kuyilapho ungaphansi kwamamitha angu-7 ukusuka edolobheni laseMilwaukee, izifunda zeSigceme Sesithathu nesesihlanu, izindawo zokuthenga ezinkulu, isikebhe saseLake Express, njll. Ibhulokhi elingu-1 ukusuka ogwini oluhle lweLake Michigan. 5 mi ukusuka eMitchell Int'l Airport.
Ibhulakufesi elibandayo noma elishisayo kuhlanganisa.
Isithuthuthu sasendlini & indawo yokupaka ibhayisikili.
Samukela izivakashi ezineminyaka engu-6 nangaphezulu ukuze wabelane ngendawo yethu yokuhlala.
Idizayini yethu kanye nokuhlobisa kwethu kuwumfanekiso kaFrank Lloyd Wright. Sikunikeza ngendawo yegalaji yesithuthuthu sakho(izi) namabhayisikili.
Ngezinyanga ezifudumele zesimo sezulu sikumema ukuba uphumule kuvulandi ongemuva futhi ujabulele imvelo nokuzola. Ilungele ukwenza, ukufunda, ukuxoxa nokulala.
Sicela uqonde ukuthi uqasha igumbi eliyimfihlo negumbi lokugezela. Sihlala endlini kodwa siyakwamukela ukuthi wabelane ngezindawo zethu eziningi ezivamile.
Indawo yokungena yezivakashi evuleke ngamasentimitha angaphezu kuka-81
4.95 · 143 okushiwo abanye
Sihlala eDolobheni elincane kakhulu lase-St. Francis eliphakathi kweDolobha lase-Milwaukee (indawo edumile ye-"Bay View") kanye nedolobha elisempumalanga ngqo yesikhumulo sezindiza okuthiwa i-Cudahy. Kuyidolobha elithule eliphephe kakhulu elifinyeleleka ngokushesha eMilwaukee, eCudahy, e-Oak Creek, eSouth Milwaukee, eFranklin, eGreenfield naseGreendale. Sitholakala ngasosebeni lwechibi olunikezela ngamamayela amabhayisikili kanye nezindlela zokuhamba ngezinyawo. Siseduze ne-Interstates 894, 94 & 794 kanye nezindawo eziningi zokudlela EZAMAKHULU, amasonto amahle awo wonke amahlelo nezitolo.
Ibungazwe ngu-Robert & Mary Jo
Love life with my wife! Travel, baking, reading, knitting - we enjoy taking time to have fun!
Thina (u-Bob noMary) sinolwazi oluningi kwezokuvakasha endaweni futhi singancoma imisebenzi nemicimbi ezofanela izintshisekelo zakho. Sisebenza kahle kakhulu ngokunikeza izikhombisi-ndlela futhi. Kuphakathi kokuthi sisekhaya noma sishayelwa ucingo uma kukhona okudingayo.
Kodwa uma ufuna ukuba wedwa, vele usazise futhi sizozenza singabonakali.
Thina (u-Bob noMary) sinolwazi oluningi kwezokuvakasha endaweni futhi singancoma imisebenzi nemicimbi ezofanela izintshisekelo zakho. Sisebenza kahle kakhulu ngokunikeza izikhombis…
URobert & Mary Jo Ungumbungazi ovelele